Itemplate ye-AMP yeeBlogger-Yenza kusebenze iGoogle AMP, Kulula! - XH
Itemplate yasimahla yeGoogle AMP yeBlogger.com- Isikhokelo samanyathelo nenyathelo
Sebenzisa iGoogle AMP ngethegi yemeta enye ! -Sebenzisa itemplate yasimahla yeBlogger AMP ekhoyo apha ukubonelela ngokuzenzekelayo ngamaphepha e-AMP ahambelana noGoogle kwiibhlog zakho.
Lungiselela ibhlog yakho yebhlog yezixhobo eziphathwayo kunye nabasebenzisi bazo , ngaloo ndlela kuphuculwe iiposti zakho zendlela ye- Mobile First Index .
Uvavanye ngoku: faka i-meta tag kwaye ugqibe
Faka / sebenzisa itemplate yeBlogger AMP
Esi sikhokelo sinyathelo-nge-nyathelo silandelayo sikubonisa indlela yokufaka kunye nokuvula itemplate ye-AMP kwibhlog yakho yebhlog. Emva kokudibanisa, yonke enye into iqhuba ngokuzenzekelayo ngasemva- nceda uqaphele ukuba injini yokukhangela kufuneka iqale iqonde kwaye isebenze i-AMPHTML meta tag kumaphepha athile ebhlog yakho ngaphambi kokuba iinguqulelo ze-AMP zivele kwiziphumo zokukhangela!
Ngena kwiakhawunti yakho yeBlogger kwaye uye kwiDashboard yeBlogger.
Faka ikhowudi yewijethi ye-AMP
Ukusuka kwideshibhodi yeBlogger, yiya kule ndlela ilandelayo:
Itemplate -> Hlela i-HTML
Kwikhowudi ye-HTML, yongeza le meta tag elandelayo kwenye indawo <head>:
Gcina kwaye ugqibile!
Gcina Utshintsho. Itemplate ye-AMP emva koko ifakwe kwaye yenziwe yasebenza kwibhlog!
Kutheni le template ye-AMP?
Le widget esemthethweni ye-AMP / itemplate yeebhlog, ezisuka amp-cloud.de, isebenze amaPhepha eeSelfowni aKhawulezileyo (AMP) kwibhlog yakho - ke yenza iifayile ze-AMP ezihambelana noGoogle ngaphandle kolunye ulwazi lwe-AMPHTML, ngaphandle kwexesha elongezelelekileyo, ngokulula nangaphandle kwentlawulo. Iinguqu zezithuba zakho zeblogi, kunye ne-HTML meta tag enye!